Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo baaritaano caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah u sameysay caruur iyo haween danyar ah. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo baaritaano caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah u...
Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo baaritaano caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah u sameysay caruur iyo haween danyar ah.
Wasaarada caafimaadka Dowlad goboleedka Galmudug oo gacan ka heleysa Hay’ad lagu magacaabo Childbirth Survival international (C.S.I) , ayaa markii u horeysay ka howl biloowday deegaanada Galmudug, waxaana baaritaano caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah usameysay caruur iyo haween danyar ah, kana mid ah qoysaska barakacayaashaa, kuwaasi oo qabay xanuuno, islamarkaana ay u awoodi waayeen sababa dhaqaale awgood in ay tagaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay.
Muxyadiin Cismaan Gabayre oo ka mida masuuliyiinta hay’adda ayaana ugu horeyn warbaahinta Qaranka soomaaliyeed uga warbixiyay sababaha keenay in xilligaan ay daweyn iyo baaritaano caafimaad u sameeyaan dadka danyarta ah.
Wasiirka wasaarada Caafimaadka Dowlad Gobaleedka Galmudug Marwo Naciimo Maxamed Catoosh, ayaa uga mahad celisay Hay’adda C.S.I daaweynta iyo baaritaanada caafimaad ee ay u sameeyeen hooyada iyo dhalaanka soomaaliyeed, iyadoona sheegtay in ka wasaarad ahaan ay soo dhaweeyn doonaan cid kasta oo wax u qabaneysa danyarta ku nool guud ahaan deegaanada Galmudug.
Previous articleWasiirka ku xiggeenka Wasaaradda Owqaafta XFS oo la kulmay Maayarka Caasimada Jabuuti
Next articleTartanka Orodka gaaban oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.